Google miasa amin'ny famantaranandro marani-tsaina Pixel izay ho tonga amin'ny fararano | Androidsis
Google handefa Smartwatch Pixel amin'ity fararano ity
Ny Google I / O 2018 dia tazonina amin'izao fotoana izao, na dia maro aza no efa manana ny fahitany ny hetsika hotanterahin'ilay orinasa amin'ny volana oktobra. Ity no hetsika aseho araka ny fomban-drazana ny Google Pixels. Na dia toa tsy amin'ity taona ity aza ny telefaonan'ny marika dia tsy ho tonga irery. tNa hoe hiasa amin'ny fandefasana smartwatch Pixel ilay orinasa.
Evan Blass, iray amin'ireo mpanafika malaza sy azo atokisana indrindra, no tompon'andraikitra tamin'ny famoahana ity vaovao ity. Toa, Google dia handefa famantaranandro marani-tsaina ao anatin'ny faritry ny Pixel. Famantaranandro iray hikatsahana ny hampiroborobo ny fanombohana ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa.
Google dia nanolotra ny fiandohan'ity taona ity ny kinova fanavaozana ny rafitra fiasa ho an'ny famantaranandro. Ezaka ataon'ny orinasa hampiroboroboana ny famantaranandro Android eny an-tsena. Ankehitriny, ny fanombohana famantaranandro ao anatin'ny fianakavian'i Pixel no dingana farany.
Satria io no ho tonga ny famantaranandro ao anatin'ny rafitra fiasa. Mety ho toa filokana mampidi-doza izany, saingy hanome fisondrotana ilaina amin'ny Wear OS hanitatra eo amin'ny tsena. Satria ny Pixel smartwatch novolavolain'i Google dia miteraka fahalianana be.
Mandrak'izao tsy fantatra hoe hanao ahoana ity smartwatch ity na izay famaritana azy. Mety haharitra herinandro vitsivitsy vao hivoaka ny tahirin-kevitra, farafaharatsiny ny voalohany aminy. Ka tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa momba ity famataranandro ity sy ny drafitry ny orinasa.
Na dia tsy misy fisalasalana aza Tena mahaliana ny famporisihana an'i Google handefa famantaranandro ao anatin'ny fianakaviana Pixel. Manantena ny handre antsipiriany bebe kokoa momba ity famataranandro ity izahay sy ny maha-zava-dehibe ny Wear OS atsy ho atsy. Ahoana ny hevitrao momba ireo drafitra ataon'ny orinasa ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google handefa Smartwatch Pixel amin'ity fararano ity
Ireo vokatra mandeha ho azy ao Xiaomi dia mifanaraka amin'ny Google Assistant ankehitriny
Tsy azo atao intsony ny manavao ny telefaona ZTE